Maxaa Kala Heysta Reer Koofureedka Yurub Ee Portugal Vs Spain, Ciyaar Aad U Adag. 2012-06-26 22:08:29
Maxaa kala heysta reer koofureedka Yurub ee PORTUGAL V SPAIN.
Kulan aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka qaramada yurub ee Euro 2012 ayaa dhexmarayso dalalka Portugal iyo Spain.
Ciyaartaan oo ka dhacayso garoonka Donbass Arena ee magaalada Donetsk ee dalka Ukrain ayaa waxaa isaga hor imaanaya labada dal ee ku yaalla Koofurta Yurub ee Spain iyo Portugal.
Weeraryahanka wadanka Portugal Helder Postiga ayaa safan doonin kulankaan,iyadoo Tababare Paulo Bento ayaanan awoodin ama aan si rasmi ah u sheegi Karin cidda uu ku badali doonno ciyaaryahankaan ka dhaawacan.
Helder Postiga ayaa lagu badalay weeraryahanka weerarka kooxda Besiktas ee Hugo Almeida.
Tababaraha xulka Spain Vicente del Bosque ayaa lagu soo waramayaa in uusan jirin xidig dhaawac cusub ka qaba ama kasoo gaaray kulankii France ay ka badiyeen.
Weeraryahanada kala ah Fernando Torres iyo Pedro ayaa suura gal ah ama laga yaabaa in lagu soo bilaabi doonno kulanka ay kaga horjeedaan xulka Portugal.
Xulka Spain wuxuu aaminsan yihin in ay ka wanagsan yihiin dalka Portugal maxaa yeelay waxa ay sheegaan in xulka Portugal uu yahay kaliya C.Ronaldo waxana labadaan dal ay ku kulmeen koobka adduunka iyadoo 1-0 looga badiyay dalka Portugal,waxana bishi November 2010 ay ku kulmeen ciyaar saaaxibtinimo waxaan a4-0 ku badiyay dalka Portugal laakin Ronaldo kama uusan mid ahayn xidigaha goolasha dhaliyay,waxana ay ahayd guul daradii ugu weyneeyd ay Spain la kulmaan tan iyo 1963.
Ciyaaryahanka 2-aad ee ugu wanaagsan caalamka C.Ronaldo ayaa ku fashilmay inuu gool ka dhaliyay dalka Spain saddex kulan oo uu la ciyaaray.
Awoodda Spain ee ciyaar wanaagga ama kubad haysashada ayaa ah mid wanaagsan gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee koobka yurub ay la ciyaraan dalka France.
Kulamadii hore ay wada ciyaareen labadaan dal.
Dalka Spain ayaa ka badiyay Portugal labo jeer kaliya 54-tii Sanno ee ugu dambeeyay ay kulmaan,waxaana dalalkaan ay kulmeen 35 jeer.
Dalka Portugal ayaa waxaa uu ka badin waayay Spain 15-kii sanno ee ugu horeeyay,waxaana ay markii ugu horeysay ay Portugal ka badiyay dalka Spain sanadkii 1948.
Dalka Spain ayaa ka guul badan dalka Portugal, waxaa Spain ay badisay 16 jeer halka Portugal uu ka badiyay 6 jeer.
Kulamada lixda jeer ee uu badiyay Portugal ayaa dhaman waxaa ay ku badiyeen gudaha dalkooda.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay lix gool oo koobka qaramada yurub kaliya Alan Shearer oo 7 dhaliyay iyo Michel Platini oo 9 gool dhaliyay ayaa ka badan Cristiano Ronaldo taariikhda koobkaan.
Dalka Portugal ayaa laga badiyay afar kamid ah shantii Semefinalka ee ugu dambeysay,waxana halka jeer ee kaliya ay badiyeen ay ka badiyeen dalka Holland oo 2-1 kaga adkaadeen koobkii Euro 2004 oo ay Portugal koobkaas marti galinayeen.
Dalka Spain ayaa raba inuu si dhaafo dalka Portugal si uu u gaaro koobka Qaramada yurub finalkiisa waana dalka difaacanaya koobkan.
Spain ayaa waxaa uu sameeyay 2,623 baasas ah koobkan Euro 2012 waxaana uu ka badan yahay dalka Portugal oo sameeyay baasas dhan 1,159.
Kulan aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka qaramada yurub ee Euro 2012 ayaa dhexmarayso dalalka Portugal iyo Spain.Ciyaartaan oo ka dhacayso garoonka Donbass Arena ee magaalada Donetsk ee dalka Ukrain ayaa waxaa isaga hor imaanaya labada dal ee ku yaalla Koofurta Yurub ee Spain iyo Portugal.Weeraryahanka wadanka Portugal Helder Postiga ayaa safan doonin kulankaan,iyadoo Tababare Paulo Bento ayaanan awoodin ama aan si rasmi ah u sheegi Karin cidda uu ku badali doonno ciyaaryahankaan ka dhaawacan.Helder Postiga ayaa lagu badalay weeraryahanka weerarka kooxda Besiktas ee Hugo Almeida.Tababaraha xulka Spain Vicente del Bosque ayaa lagu soo waramayaa in uusan jirin xidig dhaawac cusub ka qaba ama kasoo gaaray kulankii France ay ka badiyeen.Weeraryahanada kala ah Fernando Torres iyo Pedro ayaa suura gal ah ama laga yaabaa in lagu soo bilaabi doonno kulanka ay kaga horjeedaan xulka Portugal.Xulka Spain wuxuu aaminsan yihin in ay ka wanagsan yihiin dalka Portugal maxaa yeelay waxa ay sheegaan in xulka Portugal uu yahay kaliya C.Ronaldo waxana labadaan dal ay ku kulmeen koobka adduunka iyadoo 1-0 looga badiyay dalka Portugal,waxana bishi November 2010 ay ku kulmeen ciyaar saaaxibtinimo waxaan 4-0 ku badiyay dalka Portugal laakin Ronaldo kama uusan mid ahayn xidigaha goolasha dhaliyay,waxana ay ahayd guul daradii ugu weyneeyd ay Spain la kulmaan tan iyo 1963.Ciyaaryahanka 2-aad ee ugu wanaagsan caalamka C.Ronaldo ayaa ku fashilmay inuu gool ka dhaliyay dalka Spain saddex kulan oo uu la ciyaaray. Awoodda Spain ee ciyaar wanaagga ama kubad haysashada ayaa ah mid wanaagsan gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee koobka yurub ay la ciyaraan dalka France. Kulamadii hore ay wada ciyaareen labadaan dal. Dalka Spain ayaa ka badiyay Portugal labo jeer kaliya 54-tii Sanno ee ugu dambeeyay ay kulmaan,waxaana dalalkaan ay kulmeen 35 jeer. Dalka Portugal ayaa waxaa uu ka badin waayay Spain 15-kii sanno ee ugu horeeyay,waxaana ay markii ugu horeysay ay Portugal ka badiyay dalka Spain sanadkii 1948. Dalka Spain ayaa ka guul badan dalka Portugal, waxaa Spain ay badisay 16 jeer halka Portugal uu ka badiyay 6 jeer. Kulamada lixda jeer ee uu badiyay Portugal ayaa dhaman waxaa ay ku badiyeen gudaha dalkooda. Portugal Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay lix gool oo koobka qaramada yurub kaliya Alan Shearer oo 7 dhaliyay iyo Michel Platini oo 9 gool dhaliyay ayaa ka badan Cristiano Ronaldo taariikhda koobkaan.Dalka Portugal ayaa laga badiyay afar kamid ah shantii Semefinalka ee ugu dambeysay,waxana halka jeer ee kaliya ay badiyeen ay ka badiyeen dalka Holland oo 2-1 kaga adkaadeen koobkii Euro 2004 oo ay Portugal koobkaas marti galinayeen.
Spain Dalka Spain ayaa raba inuu si dhaafo dalka Portugal si uu u gaaro koobka Qaramada yurub finalkiisa waana dalka difaacanaya koobkan.Spain ayaa waxaa uu sameeyay 2,623 baasas ah koobkan Euro 2012 waxaana uu ka badan yahay dalka Portugal oo sameeyay baasas dhan 1,159.